Best Online English Learning in Myanmar - About - MyanLearn.org
MyanLearn application ဟာ အင်္ဂလိပ်စာ သင်ယူလေ့လာလိုသူများအတွက် အထူးရည်ရွယ်ပြီး ထုတ်လုပ်ထားသည့် application ဖြစ်သောကြောင့် အသုံးပြုသူများအတွက် စိတ်၀င်စားဖွယ်ရာ သင်ကြားရေးအစီအစဉ်များသာမကအခြားပေါ့ပေါ့ပါးပါးနှင့် အကျိုးရှိစေမည့် ကဏ္႑များစွာလည်း ပါ၀င်ပါတယ်။
အဓိက ပါ၀င်တဲ့ ကဏ္႑များကတော့ ရှင်းလင်းပြီး နားလည်လွယ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာများ၊ videoများ၊ စိတ်၀င်စားဖွယ် အကြောင်းအရာများ၊ သင်ကြားပြီးသော သင်ခန်းစာများအတွက် သက်ဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်ခန်းများ၊ မေးခွန်းအစုံများ၊ အင်္ဂလိပ်စာနှင့်ပတ်သက်သော ဂိမ်းများ၊ အဘိဓာန် နှင့် ဘာသာပြန်စနစ် စသည်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
MyanLearn application ရဲ့ အားသာချက်တွေကတော့ မတူညီသော အသုံးပြုသူများအတွက် ရွေးချယ်စရာ levelများ စနစ်တကျ ခွဲထားခြင်း၊ သင်ကြားထားသော သင်ခန်းစာ တစ်ခုစီတိုင်းအတွက် လေ့ကျင့်ခန်းများ ပါရှိခြင်း၊ အပတ်စဉ် အရည်အချင်းဆန်းစစ်နိုင်မည့် မေးခွန်းများ တင်ပေးခြင်း စသည်တို့အပြင် အင်္ဂလိပ်စာ ဂိမ်းများ၊ လက်တွေ့အသုံးချ အင်္ဂလိပ်စာများ သင်ကြားပေးခြင်းတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုအချိန်တွင် လေ့လာအသုံးပြုသူများ အဆင်ပြေစေရေးအတွက် MyanLearn မှ အကျိုးအမြတ်ရယူခြင်းမရှိပဲ သင်ကြားရေးဝန်ဆောင်မှုကို free of charge ဝန်ဆောင်ပေးထားပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင်မူ အသုံးပြုသူများ အဆင်ပြေကျေနပ်နိုင်မည့့် နှုန်းထားတစ်ခုဖြင့် ကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
What Can We Provide!
This isaseries of quick tests that will give youarough idea of your level of English.
You learn necessary and interesting parts of English language including videos.
Students benefit from practice because they are able to apply knowledge through interaction.
You can find various type of English fun games here and have fun.
This section can help you translate between Burmese and English.
This section can help you classes that you want attend.